Caalamka Akhriska: Milicsi | Heeshi
Caalamka Akhriska: Milicsi
Jimce, Luulyo 8, 2016 ·	by Idiris M. Cali ·	in Milicsi	· Faallo u dhaaf
Cabdicasiis Guudcadde, xaqalciidka Ciidulfidrida 1437 ee uu muquunnada inoo siiyay waa buugga Caalamka Akhriska, kaas oo si xallad iyo xigmad leh u dhiiriggelinaya akhriska. Waxa uu ka kooban yahay afar cutub iyo arar ka horraysa–gadaalna waxaa ka raacsan tax maqaallo/buugaag ah oo akhristuhu ka korarsan karo wacaallo dheeraad ah oo ku saabsan akhriska. Koobnidiisa awgeed, akhristuhu wax ka yar 2 saacadood ayuu ku haleeli karaa xogaha buuggan; se in uu taabo xogahaas waxaa ka xigta dhawr jeer oo uu akhriyo.
Ararta uu ku xusayo sida aan uga “maqannahay Caalamka Akhriska” ka dib, qoruhu waxa uu cutubka koobaad ku qeexayaa akhriska, kaas oo uu ku micneeyay: “Habka isha looga dhigo mid la cimri ah dhegta” (3)! Sidoo kale waxa uu kaga warramayaa, si kooban, taariikhda akhriska. Inkasta oo uu xiganayo qoraayo isku hawlay taariikhaynta akhriska, haddana meelaha ay ka gaabinayaan ayuu si cad u tilmaamayaa, taas oo ah keliya qoraayadaasi in ay ka “hadlayaan taariikhda akhriska ee waddamadooda, balse aanay dunida oo idil ka wada turjumayn” (5).
Labada cutub ee xiga waxa ay ku saabsan yihiin, oo ay si qodobaysan u soo taxayaan, mudnaanta iyo midhaha uu akhrisku u leeyahay da’ kasta, yar iyo weyn. Waxa ay labadan cutubi ku nuuxnuusanayaan in akhrisku yahay daw ka mid ah dawyada guul oo dhan lagu hanto. Markaas ayaad isweydiinaysaa: Nebi Muxammad (SCW) oo sidii la ogaa u gaaray guusha aan wali midhaheeda ruugaynno wax ma akhriyi jirin e, xaggee akhris iyo guuli iska soo galeen? Ma na foga jawaabteeda, ee waa ta’ si maangal ah ugu sharaxan bog 33-34!
Cutubka ugu dambeeya ee ku saabsan marrinka loo maro akhriska waxa uu qoruhu ku soo bandhigayaa qoddobbo aasaasi ah oo kala dhigdhigaya siyaabaha wax loo akhristo. Qodobbadani waxa ay si guud ahaaneed akhristaha ku hagayaan in uu akhriyo mawduucyada uu jamanayo, una akhriyo si maanfuran, qorshaysan oo muddaysan. Waayo, himilo kasta oo aayo leh waxaa lagu gaaraa qorshe si habsami leh u degsan. Sidaas awgeed, akhriska qorshaysan waxa uu qofka ku tababaraa hanashada himilo kasta.
Caalamka Akhriska waxa uu ku furmayaa tirakoob naxdin leh oo muujinaya sida ay akhris la’aantu u baahsan tahay. Nasiib wanaag, waxa uu buuggani ka qaybqaadanayaa yaraynta akhris la’aanta. Sidee? Horta, waa buug kooban, si fudud oo hufan u qoran, oo xogo dhur leh na xambaarsan. Sida kale, waxa uu buuggu door ku yahay in uu akhristuhu la haasaawi karo, oo waxa uu weydiiyo ee akhriska ku saabsan ba uu warcelimo waafi ah ka heli karo. Si toos ah, waa buug kugu xiraya Caalamka Akhriska.
Waxaa qoraalkan markii ugu horraysay lagu daabacay Warsidaha BADSO.
← Muxammad Cali: Geesigeenna
Bandhigyada buugaagta →